Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Aeromexico ifayile yayo yesiCwangciso se-11 soCwangciso ngokutsha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Ukugcwaliswa kwesiCwangciso sisiseko esibalulekileyo kwindlela yeAeroméxico eya kuvela kwinkqubo yayo yeSahluko se-11, kwaye iNkampani ijonge phambili ekuqhubekeni nokubonisana nabathathi-nxaxheba bayo ukugqibezela isiCwangciso ngokuvumelana.
IAeromexico ifayilisha isiCwangciso esiHlanganisiweyo soLungelelwaniso ngokutsha, ingxelo yokudiza isiCwangciso kunye nesindululo sokuvuma iinkqubo zokucela malunga nesiCwangciso.
IAeromexico iya kuqhubeka nokulandela, ngendlela enocwangco, uhlengahlengiso lwayo lwezemali ngokuzithandela kwiSahluko se-11.
IAeromexico iya kuqhubeka ukomeleza imeko yayo yemali kunye nemali kwaye ikhusele kwaye igcine ukusebenza kwayo kunye neeasethi.
IGrupo Aeroméxico, iSAB de CV yazisa ukuba ifayilishe, kunye neenkxaso zayo ezinamatyala kwiNkampani isahluko se-11 senkqubo yohlengahlengiso lwezemali, isiCwangciso esiHlangeneyo soLungelelwaniso kwakhona, ingxelo yokudiza enxulumene nesiCwangciso kunye nesindululo sokuvuma iinkqubo zokucela ngentlonipho KwisiCwangciso.
Aeroméxico unenjongo zokufaka enye okanye nangaphezulu izincedisi kwisiCwangciso kwishedyuli ebekwe kwesi siCwangciso okanye njengoko iyalelwe ngenye indlela yiNkundla. Ukumanyelwa kokwamkelwa kweNgxelo yoKwazisa kulindeleke ukuba kubanjwe ngomhla okanye malunga ne-Okthobha 21, 2021. Ekungeneni komyalelo wokuvuma iSitetimenti sokuXela, iNkampani iceba ukuqala inkqubo yokucela iivoti kwesi siCwangciso.
Aeroméxico iya kuqhubeka nokulandela, ngendlela enocwangco, uhlengahlengiso lwayo lwezemali ngokuzithandela kwisahluko se-11, ngelixa iqhubeka nokusebenza inikezela ngeenkonzo kubathengi bayo kwaye inikezela kubanikezeli bayo iimpahla kunye neenkonzo eziyimfuneko ekusebenzeni.
Aeroméxico iya kuqhubeka ukomeleza imeko yayo yemali kunye nemali, ikhusele kwaye igcine ukusebenza kwayo kunye nezinto zayo, kwaye iphumeze uhlengahlengiso oluyimfuneko ukunciphisa iziphumo ze-COVID-19.
IAerovías de México, SA de CV esebenza njengeAeroméxico, yinkampani yenqwelomoya yenqwelomoya eMexico, ese Mexico City. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo kwiindawo ezingaphezu kwama-90 eMexico; EMantla, eMzantsi nakuMbindi Merika; iCaribbean, iYurophu neAsia.